France Waxay Samaysay Tijaabo Si Loogu Kordhiyo 3000 Bukaan Xashiishad Caafimaad Oo Bilaash Ah • Dawooyinka Inc.eu
Dib udhac yar kadib, Olivier Véran, Wasiirka Isbahaysiga iyo Caafimaadka Faransiiska, ayaa saxiixay wareegto lagu bilaabayo barnaamij tijaabo ah oo bukaanka loogu siinayo xashiish caafimaad oo bilaash ah.
Daahfurka ayaa markii hore qorshuhu ahaa in la sii wado 2020, laakiin cudurka Coronavirus oo faafa awgood, ayaa dib loogu dhigay illaa horaantii 2021, sida ay ku dhawaaqeen wasaaradda iyo wakaaladda daawooyinka Faransiiska (ANSM) xagaagan.
Duuliyaha wuxuu socon doonaa ugu yaraan lix bilood wuxuuna ku lug yeelan doonaa qiyaastii 3.000 oo bukaan ah oo la ildaran xaalado daran sida xanuun joogto ah iyo suuxdin.
Iyada oo xeerarka la dhammaystiray iyo shuruudaha codsiga ee ganacsiyada iyo ururada la daabacay toddobaadkan, tallaabada xigta waa in la doorto alaab-qeybiyeyaasha. Waqtiga kama dambaysta ah ee dhinacyada daneynaya waa 24-ka Nofeembar.
Inkasta oo qaar ay dareemeen in mid ka mid ah faa'iidooyinka barnaamijkan uu yahay in alaab-qeybiyeyaashu ay noqon karaan kuwa ugu horreeya ee soo gala suuqa xashiishadda marka ay mas'uuliyiinta Faransiisku sharciyeeyaan daroogada, ayaa si kale lagu sheegay wareegtada.
Intaas waxaa sii dheer, waxay noqon doontaa jadwal si dhow loola socdo, halka alaab-qeybiyeyaasha ay tahay inay buuxiyaan dhowr foomam waxaana lagu qiimeyn doonaa nidaamka dhibcaha.
Cannabis caafimaad oo bilaash ah laga bilaabo Maarso 2021
Dawada ugu horreysa ee la qoro waxaa la filayaa in la fuliyo dhammaadka Maarso 2021. Si aad xaq ugu yeelatid, bukaanka qaba cudurada soosocda iyo xaaladaha soosocda ayaa awooda inay kaqeybqaataan barnaamijka tijaabada ah:
Xanuunka neerfaha ee xanuunka, noocyada qaarkood ee suuxdinta daawada u adkeysata, astaamo gaar ah oo aan laga bogsan karin oo ku saabsan cudurka kansarka ee la xiriira daaweynta kansarka ama xanuunka kansarka, xaaladaha qalbi qaboojinta, xanuunka murugada leh ee cudurka sclerosis ama cudurada kale ee habka dhexe ee neerfaha.
Sida wasaaraddu sheegtay, xashiishadda ayaa la siin doonaa bukaanada oo isugu jira ubaxyo qalalan iyo saliid.
Cannabis caafimaad oo bilaash ah laga bilaabo Maarso 2021 oo loogu talagalay bukaanada 3000 ee ku nool Faransiiska
Khubarada ayaa rumeysnaa in barnaamijkan uu noqon karo tallaabo weyn oo horay loo qaaday maaddaama xashiishadda caafimaadka aan laga heli karin dalka.
In kasta oo mas'uuliyiinta Faransiisku ay leeyihiin cod yar oo ka duwan marka ay timaaddo faa'iidooyinka daawada ee loo maleynayo in daroogada, xaqiiqda xashiishka waa in loo isticmaalaa oo keliya warqad dhakhtar ama xirfadle caafimaad.
Intaa waxaa dheer, dhammaan alaabooyinka waa in ay ansixiyaan Hay'adda Badbaadada Caafimaadka Qaranka (NMSA). Haddii barnaamijka tijaabada ahi shaqeeyo, waxay ku dambayn kartaa hab raaxo badan oo daroogada ah mustaqbalka.
In kastoo sharciyeyn buuxda lagu sameeyo Faransiiska wali waxay umuuqataa mid aad u fog, horumar cad ayaa laga wadaa Emmanuel Macron, madaxweynaha xilka haya ee Faransiiska.
Ilaha waxaa ka mid ah AnalyticalCannabis (EN), Canex (EN), HappyMag (EN), Qodobka (EN)
Faransiiskafreesharci ahaandaawodaawada cawskasharcigabaaritaanka weed
Aaladda 5 barnaamijyada weed ee ugu wanaagsan
Ma waxaad raadineysaa barnaamijyo xashiishad xiiso leh oo waxtar leh? Waxaan ku taxnaa shan barnaamij oo xashiishad jecel oo bilaash ah ...
Tijaabinta Weed ayaa ah mid gaabis ah: Degmooyin badan oo intooda badani way sii deynayaan
Tiro sii kordheysa oo degmooyin ah ayaan dooneyn inay kaqeybqaataan tijaabada xashiishka ee golaha wasiirada. Iyada…
Dukaammada kafeega waxay la yimaadaan wax kale oo tijaabo ah
Milkiilayaasha dukaamada kafeega waxay rumeysan yihiin in dukaan kasta oo kafee ah oo Nederland ku yaal ay tahay inuu awood u yeesho inuu kaqeybqaato tijaabada haramaha ...
6 fikradaha hadiyadeed ee gaarka ah ee CBD ee Thanksgiving iyo Black Friday Cyber ​​Isniinta 2020
Saliida CBD: Hagaha Ugu Dambeeya ee 8 Faa'iidooyinka CBD